IiKiti zoMdibaniso, amaTywina, iZatifikethi zoMbane kunye neeBhanti eziHlanganisiweyo
Ikhithi yakho yokudibanisa ibaluleke kakhulu kwishishini lakho elihlanganisiweyo. Ukugcina iikopi zakho zoqobo okanye eziqinisekisiweyo zokufakwa okanye zokwenziwa, kunye namanye amaxwebhu abalulekileyo anje ngemizuzu yentlanganiso yonyaka, izilungiso, iirekhodi zeakhawunti yebhanki, izatifikethi zesitokhwe kunye neefom ze-IRS. Ikhithi yakho yecandelo lakho kunye nencwadi erekhodayo ilungiselela amaxwebhu abalulekileyo abomthetho kunye nawemali yakho.
Izixhobo zethu zenkampani zeza kwimeko entle ebomvu ye-leatherette enegama lombutho wakho eligutyungelwe igolide kumqolo. Okubandakanyiweyo kukwenziwa okusemthethweni kweZiko eliManyeneyo ngegama lakho lombutho, ilizwe kunye nomhla wokufakwa, incwadi yeeRekhodi eziHlanganisiweyo, umzekelo, iseti yemithetho, iMizuzu yeNkampani, irejista yabalawuli kunye noluhlu lwamagosa, irejista yabanini zabelo, irejista yezokhuseleko Izivumelwano kunye nezatifikethi ezizezomntu ngamnye ezivenkileni.
Uku-odola i-Corporate Kit, nceda ufowunele isebe lethu lenkonzo yabathengi iMon-Fri phakathi kwe-7: 00AM kunye ne5: 00PM ixesha lePacific apha:
I-800-830-1055 iToll Free
Okanye ungasebenzisa i-oda lethu lokungenisa iifom apha: Oda iArhente kunye neKhithi yeNdibaniselwano
I-standard Corporate & LLC Kit - $ 99
Iinkampani ezihlanganisiweyo zizixhobo ezihlanganisiweyo zenziwe ngexabiso eliphakamileyo elinemitha emibini elitywiniweyo elitywinwe ngombane ngaphezulu kwebhodi ehlala ixesha elide ukubonelela ngenkonzo eyandisiweyo yobomi kunye nokuqina okuphezulu. Owona mgangatho uphakamileyo ubuyelwe uyilo oluphindwe kathathu kunye nokuvulwa okubini kunye nokuvala kwamanyathelo avumela amaphepha ukuhlala elele phantsi kwaye ajike ngokulula. I-binder nganye ichazwe ngegolide kwaye ifumaneka ngemibala ye-5: i-burgundy, iluhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, emnyama kunye ne-brown kunye nezitayile ze-3: I-Portfolio emiselweyo, uSlim oMgangatho kunye neMigangatho (iKhiti epheleleyo ene-seal & Certification)
Ikhithi ejongene noMgangatho weSlim- $ 99
Ezi Kampani ziKhitshi ezihlanganisiweyo zenziwe nge-vinyl esemagqabini enomgangatho ophezulu. Zona kwaye zinciphile kuneekiti ezisemgangathweni. Isixhobo esiphakamileyo esibuyiselwe umtya osisixhobo esinezintambo ezintathu esineemfuno zokuvula kunye nokuvula ii-boosters masenze amaphepha alale kwaye avumele ukuba ajike ngokulula. Ibhanti nganye esemgangathweni ichazwe ngegolide kwaye ifumaneka ngemibala ye-5: imnyama, nsundu, luhlaza, luhlaza, nobomvu. (Isixhobo esizalisiweyo esinesitywina kunye neSatifikethi)
Iphothifoliyo esemgangathweni okanye ikhithi ye-LLC - $ 99
Ukuvalwa kweeflash kweVelcro kuya kugcina onke amaxwebhu akho. Ezi zixhobo zakhiwe zodidi oluphezulu olunemitha emibini. Owona mgangatho uphakamileyo ubuyiselwe umatshini ngeendlela ezintathu ezineendandatho ezivulekileyo kwaye ukuvala ii-boosters kuvumela amaphepha ukuba alale kwaye ajike ngokulula. Ibhanti nganye esemgangathweni ichazwe ngegolide kwaye ifumaneka ngemibala ye-5: imnyama, nsundu, luhlaza, luhlaza, nobomvu. (Isixhobo esizalisiweyo esinesitywina kunye neSatifikethi)
I-Linen Corporate okanye i-LLC Kit - $ 119
Izintambo zethu ezenziwe ngezandla, ezomthwalo onzima zenziwe ngelineni esemgangathweni, ezenza zahluke kwaye zibukeke. Ibhloko nganye yakhiwa ngezinto ezinobunzima bokuqina okungakumbi kunye nobomi obude. Ibhanti nganye esemgangathweni ichazwe kwigolide kwaye ifumaneka ngemibala ye-3: imnyama, imnyama kunye ne-burgundy kwaye imnyama kunye grey. Ikhithi yeShishini yoLuhlu lweShishini
I-Docu-Box Corporate okanye i-LLC Kit - $ 119
Yenziwe kwi-chipboard-enobunzima, obunzima bokubethelela, uyilo olwahlukileyo lubonelela ngokhuseleko ngaphandle kwesidikheyisi esahlukileyo. Ibhokisi nganye yeDocu-Bhokisi iyafumaneka ngemibala ye-2: emnyama kunye ne-burgundy. (Zalisa ikhiti kunye nesatifikethi)
I-Zippered Portfolio Corporate okanye i-LLC Kit - $ 130
Ezi zixhobo ze-zipp zenkampani lukhetho oluhle kwabo bafuna uhlobo lwebhotile yephothifoliyo. Imiphetho ethungelweyo, ukuvalwa kwe-zipper kunye neekona zensimbi zenza ezi zinto zikhethiweyo ukuba zikhethe. Igama lombutho libhalwe kwi-chrome plated ubhedu kwitafile. (Zalisa ikhiti kunye neZatifikethi)
I-Blumberg Red Russia I-Leather Corporate & I-LLC Kit - i- $ 485
Veza ubucukubhede bakho kubatyali-mali abanokubakho, ibhanki yakho, i-CPA kunye namagqwetha. Yabizwa ngegama elithi Russian Russia.Izifihle ezintle zesikhumba zisetyenziselwa ukulenza libe lulutho, eyona nto inzima kakhulu, irekhodi eliphezulu lophawu lwezona zinto ziphambili zingathengwa ngumntu ophetheyo. Xa usenza iodolo, uyakuchaza igama lenkampani oyifunayo kwizatifikethi, itywina kunye nesitampu ngesandla kwi-24K yegolide kwispine. Kwakhona bonisa imeko kunye nomhlangano apho iqumrhu lalilungelelaniswe khona. Le khithi iza ne-20-iphepha elipheleleyo, izatifikethi ezinamaphepha anamaphepha apheleleyo aprintiweyo anegama lombutho, ilizwe, izihloko zotyikityo kunye nongxowankulu. Unga-odola izatifikethi ezongezelelweyo njengoko kufuneka. Kwamashishini okanye ii-LLC. Iza nemizuzu yenkampani eprintiweyo kunye nemithetho. (Zalisa ikhiti kunye neZatifikethi)